သစ္စာအလင်း: Buddhist Celebrities
သားကိုဦး(ဓမ္မရသ) နှင့် ကိုရဲ(အလင်းစေတမန်) ..
သည်စာ အုပ် ကလေးက အံတီ စင်္ကပူ သွားတုံးက ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ မှာ ဓမ္မဒါန လှူထားတဲ့ ထဲက ယူလာ တဲ့ စာ အုပ် ကလေးပါ..။စင်္ကပူ ကမြန်မာ ရဲ့ မြို့နယ် တစ်ခုလိုဖြစ်နေပြီုး မြန်မာပညာ တတ်တွေ အများ ဆုံးရောက်နေတဲ့ နေရာ ဖြစ်နေပါတယ်..။ ဗုဒ္ဓသာသာ မြန်မာဘုန်း ကြီးကျောင်းတွေတော် တော် များများရှိပါတယ်..။
အံတီ့သူငယ်ချင်း http: //shwenyein.blogspot.com ရဲ့ Data တွေအရဆိုရင် စင်္ကပူမှာ ဗုဒ္ဓသာသာ ဦးရေ ၄၂.၅%ရှိပြီး အစ္စလာမ်ဟာ ၁၃.၉% ရှိလေတော့ ဟာ အခြားဘာသာ တွေထက် များနေတာတွေရပါတယ် သားတို့ရေ..။
အလားတူစာအုပ် မျိုးတွေကို ဘုန်းဘုန်းဦးကုမာရ (My Thought)မှာ များစွာ ရယူ ပူဇော် နိုင် ပါတယ်..။ Eunos က သီရိလင်္ကာကျောင်းဆိုရင် ဓမ္မပဒ စာအုပ်တွေ ပါဠိ၊ အင်္ဂလိပ် ၂ဘာ သာနဲ့ ရေးထားတာ လို သလို ယူလို့ရတယ်..။
မြန်မာ ဘုန်းတော်ကြီးတွေရဲ့ ကိုယ် ပိုင် ပရိတ်စာ အုပ်တွေ အင်္ဂလိပ် လို ရေးထားတဲ့ ဗုဒ္ဓစာပေတွေ။တရားCD တွေ တော် တော် များများအလွယ်တကူ ရယူ နိုင်ပါတယ်..အံတီ စင်္ကပူက ပြန်တော့ စာအုပ်တွေတော် တော် သယ် ခဲ့တာ.. ဘတ်ဂျက် လိုင်းကလေယဉ်မယ် တွေ မျက် စောင်းထိုးခံရဘူးတယ်..။
သည် စာ အုပ်လေးမှာ Authors တွေကဆရာတော် တွေ.. မနေ့ ကပဲ ဘုန်းဘုန်း ဦးကုမာရ Blog မှာ မလေးရှား ဆရာတော် ဘုရားကြီး Dr.K.Sri.Dhmmananda အကြောင်းလေးဖတ်လိုက်ရသေးတယ်..What Buddhists Believe ဆိုတဲ့ ဆရာတော် ဘုရားရေးသားခဲ့တာပေါ့သားရယ်..။အဲဒီ စာ အုပ်ကို အရှင် အာ ဒိစ္စရံသီ(ဆရာ ဦးဆန်းလွင်)က(ဗုဒ္ဓသာသာဝင်တွေယုံကြည် ကြတာက)ဆို ပြီးဘာ သာ ပြန်ခဲ့ သေးတယ်..နောက် ပုံပါ စာရေးတဲ့သူတွေက ဒလိုင်းလားမားတို့ အာဂျန်သုမေဓော Ajhan Sumedo တို့ အကြောင်းတွေလည်း ပြော ပြစရာရှိနေ ပါသေးတယ်..။
အခု Post မှာတော့ ဟောလီဝုဒ်က မင်းသားမင်းသမီတွေ အကြောင်းလေးပဲ နည်းနည်းအမြည်းပေါ့နော်..။ဟိုတလော က အံတီကြားလိုက် တယ် သားတို့ကော ကြားလိုက်လား..နာမည် ကြီးဘော လုံးသမားDavid Beckham တို့ ဇနီးမောင်နှံ ဗုဒ္ဓသာ သာ ကူးပြောင်းတဲ့ သတင်းကိုလေ..။
အခုပုံမှာကတော့ သားတို့တွေ့မှာပေါ့နော်..နာမည်ကြီး မင်းသားမင်းသမီးဒါရိုက်တာတွေ..Buddhist Celebrities တွေနဲ့ Interview ထားတာပေါ့ကွယ်..။ How to develop Happiness in Daily Living နေ့စဉ်ဘဝတွေမှာ စိတ်ငြိမ်းအေးအောင်ဘယ်လို နေသလဲပေါ့သားတို့ရယ်..အံတီထင်တယ်..Happiness ထက် Peacefulness ကို ဆိုလို ချင်တာ ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်..။
ဟိုအရင် ရုပ် ရှင်တွေ ကြည့်နေခဲ့ စဉ်ကာ လကတော့ အံတီ Jennifer Lopez ကို Wedding Planner ကားကို ကြည့်ဘူးတယ်.တော်တော် သမာဓိကောင်းကောင်း၊တိတိကျကျ သပ် သပ် ယပ် ယပ်ကလေး သရုပ်ဆောင်တာ သတိထားမိပါတယ်..။သူ ကနာမည် ကြီးPretty Woman ကမင်းသား Richard Gere ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်လာ ခဲ့ ပြီး Spiritual Talk တွေလည်းပေးခဲ့ဘူးတာ ကြားဘူးတယ် ကလေးတို့ရေ..။
သားတို့သိတဲ့ နာမ ည် ကြီး Titanic မင်းသား Leonardo DiCaprio ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို သူ့ ရဲ့ စိတ်ဓာတ် ခွန်အားတွေ ပြန်လည် ဖြည့်တင်းပေးဘို့ ဝင်ရောက်လာ တဲ့ အကြောင်းကို London Daily Mirror သတင်းစာ ကသည်လိုဖော် ပြခဲ့ပါတယ်..။
Although he is arguably the most in-demand actor in Hollywood at the moment,Leonardo DiCaprio has joinedaBuddhist group in Los Angeles and has vowed to drop out of filmmaking until he is recharged. The newspaper quoted di Caprio as saying that he is seeking (Peace and Tranquility) and that he is considering “takingalong break before returning to set…some months, may beayear”
အံတီ ခုလို ရေးတဲ့ အကြောင်းတွေကို သားတို့ သိပြီးသားလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါ..မင်းသားတွေတောင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို ကိုးကွယ်တယ် ဆိုပြီးဂုဏ်ယူစရာမျိုးတော့ လည်း မဟုတ်လောက် ပါဘူးကွယ်။
အောင်မြင်နေတဲ့လူ ငွေတွေ ကြော်ကြားမှုတွေ Sensual Pleasure တွေကို အလျှံပါယ်ရထားတဲ့ သူတွေ ဟာ မငြိမ်းအေးတဲ့ စိတ်ကို ကုစားဘို့ရှာ ဖွေနေကြတယ် ဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်လို့ရအောင်ပါ..။
ဆရာတော် ဦးဇောတိကရဲ့တရားတော် တွေမှာလည်း အမြဲပါတယ်လေ..။ဆရာတော်ကသူ့ကို သဘော ကျတယ်..ဆရာတော် ပြောပြဘူးတာ အဆိုတော် Elvis Presley အကြောင်းလေ..လောကီပေတံ နဲ့တုိုင်းတာ ထားတဲ့ ဘဝအောင်မြင်မှုတွေ(ငွေ၊အောင်မြင်ကြော်ကြားမှု၊ ဥစ္စာ ဓနတွေ၊ ဝိုင်းဝိုင်းလည် နေတဲ့ လူတွေ)ပိုင် ဆိုင်ရရှိထားပါသော်လည်း နဲ့ Drug Dependancy ဖြစ်ပြီးအသက် ၄၂ မှာ သေသွားရရှာတယ်။ ဆောက်တည် ရာမဲ့ တဲ့ စိတ်နေစရာ အိမ်မရှိခဲ့တာဖြစ်နိုင်တာ ပဲနော်..။
အံတီက Buddhist Celebrities တွေအကြောင်းအံတီ့သူငယ်ချင်းတွေ ကို ပြောလေ့ရှိတတ်တော့.. ဟိုတလော က အံတီ့ရဲ့ အိန္ဒိယသူငယ်ချင်းတစ် ယောက် ကနင်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ မင်းသားလေ.(Richard Gereကို ပြော တာပါ.) အိန္ဒိယ ကို လာလည် တုံးက အိန္ဒိယမင်းသမီးကို လူတွေရှေ့ မှာ အနောက်တိုင်းထုံးစံနဲ့ နှုတ်ဆက် လိုက် တာ..လွန်သွားတယ်.. ဟိုကတရားစွဲ မယ် တွေဘာ တွေဖြစ်တဲ့အကြောင်း အံတီ့ကိုလာ ပြောတာ..အံတီတောင် ဘာပြန်ပြော ရမှန်း မသိ ဖြစ် သွားတယ်..။
အနောက်တိုင်း Buddhist Celebrities များရဲ့ ပြုမူ ပြောဆိုနေထိုင်မှုများဟာ မဟာ ကရုဏာရှင်ဗုဒ္ဓ ၏ ဂုဏ်ကို မဖျက်စီးစေပဲ ဂုဏ်တက်နိုင်ပါစေကြောင်း၊ထိမ်းသိန်းနိုင်ပါစေကြောင်းပဲ ဆုတောင်း လိုက် ရပါတယ် ကလေးတို့ရေ..။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 5:34 PM